Puntland iyo Jubbaland oo hakiyay ka qeyb galka shirka arimaha dayn cafinta Soomaaliya - jornalizem
Puntland iyo Jubbaland oo hakiyay ka qeyb galka shirka arimaha dayn cafinta Soomaaliya
Dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa maanta mowqif isku mid ah ka qaatay ka qeyb galka shirka arimaha maaliyadda iyo dayn cafinta, sida lagu sheegay qoraallo maanta kasoo kala baxay wasaaraddaha maaliyadda ee labada maamul.
Shirka daynta cafinta oo ay yeelan lahaayeen wasaaraddaha maaliyadda heer dowad goboleed iyo wasaaradda maaliyadda dowladda federalka Soomaaliya, ayaa 11-ka bishaan Maarso ka dhici lahaa magaalada Baydhabo ee koonfur galbeed.
Jubbaland ayaa shirkaan u hakisay kadib markii ay dowladda federalka ku eedeyeen inay fara galin ba’an ku hayso arimaheeda gudaha islamarkaana ay meesha ka baxday rajadii laga qabay dib usoo laabashada wada shaqaynta ka dhexeysay dowladda federalka iyo Jubbaland.
Balse, Puntland ayaa warsaxaafadeed midkaas ka duwan soo saartay, waxayna shirkaas kaga cudur daaratay, iyadoo ku jirta qaban qaabada shirka wadatashiga Puntland oo qabsoomaya 15-ka isla bishaan. Waxayna codsatay in muddo bil ah dib loo dhigo shirka daynta cafinta.
Shirkaan ayaa horey loogusoo qabtay magaalooyinka Muqdisho, Garowe iyo Kismaayo, iyo sidoo kale magaalada Addis Ababa.
Si kasta ha ahaatee, qorshuhu wuxuu markii hore ahaa in shirka daynta cafinta uu ka madax bannaanaado khilaafka siyaasadeed ee dowladda federalka iyo dowlad goboleedyada.